Artec – Ladoany: finday hosoka miisa 700 indray noraofina sy nogiazana | NewsMada
Mbola misy ihany ireo mpanafatra entana any ivelany, toy ny finday, minia mandika ny fenitra iraisam-pirenena, ary mihatra eto amintsika ihany koa. Nahitam-bokany indray ny asan’ny Artec sy ny ladoany, nahatrarana finday hosoka, tsy misy “code IMEI”, miisa 700 ary noraofina avy hatrany sy nogiazana.
Tsy azo leferina intsony ny fampiasana finday hosoka, na nalain-tahaka tsy ara-dalàna eto amintsika. Tsy misangy amin’izany ny tompon’andraikitra, ary hentitra ny fanaraha-maso, miainga any amin’ny fahatongavan’ny entana miditra any amin’ny seranan-tsambo, ny fanarahana ny entana any amin’ireo mpanafatra sy ny mpamongady ary misy koa ny fidinana ifotony eny amin’ny mpaninjara.
Efa nisy ny fanapotehana ireo finday miisa 1 100 misy famantarana IMEI, saingy tsy nahazo fankatoavana, ny 1 aogositra teo. Mitohy ny asa fanaraha-maso ataon’ny Antokon-draharaha mandrindra ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra (Artec) sy ny sampandraharahan’ny ladoany. Avy amin’izany faharaha-maso izany no nahatrarana indray finday nalain-tahaka sy hosoka maherin’ny 700 ka nogiazan’ny ladoany na ny sampandraharahan’ny haban-tseranana. Mpivarotra amboangadiny maromaro no nahitana azy ireo, tratra ara-potoana, ka tsy mbola voaparitak’izy ireo teny amin’ny mpaninjara. Mitohy hatrany ny fanaraha-maso na sarotra aza ny asa sy ny olana sedrain’ireo mpiasan’ny Artec sy ny ladoany.
Miantraika amin’ny kalitaon’ny fifandraisana
Lazaina fa sandoka na nalain-tahaka ny finday rehefa tsy nahazo fankatoavana ny laharana IMEI-ny. Azo atao tsara ny manamarina ny laharana ao amin’ny adiresy site web-n’ny Artec, ny www.artec.mg. Marihina fa misy fiantraikany any amin’ny hatsaran’ny fifandraisan- davitra ny fampiasana ny finday tsy ara-dalàna, nalain-tahaka. Tsy nisy ny fanaraha-maso ara-teknika azy ireny tamin’ny nanamboarana azy ka mety hampidi-doza ho an’ny mpampiasa azy ny akora nanamboarana azy.